Other Accessories – Ascent
Ascent > Products > Other Accessories
Cager B20-4 Power Bank - 10000mAh 18,500 Ks
HanyeTech Android Woven Cable 3,500 Ks
Air Cartoon Waterproof Dry Bag Case 8,000 Ks 4,500 Ks
ကိုယ့်ဖုန်းထဲက အချက်လက်တွေ ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ OTGကြိုး‌လေးကိုသာသတိရလိုက်ပါ‌နော်
4,000 Ks 3,000 Ks
Hanye Type-C OTG Data Transfer Cable
Square Mini Small Travel Pocket Zipper Micro SD/TF/Sim Card/Memory Stick/Earphone/Charger Cable/Jewel Hard Hand Holder Pounch Storage Bag/Box
ခရီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အားသွင်းကြိုးတွေ နားကျပ်တွေနဲ့ တော်တော်အလုပ်ရှုပ် ဟိုပျောက်ဒီပျောက်နဲ့ ကြုံဖူးကြမှာပါ Micro SD Cardတို့ ဖုန်းSim cardတို့လဲ ဟိုပျောက်ဒီပျောက်ဖြစ်ပေါင်းလဲများနေပြီလား? • အဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးမှာကတော့ Japan Brand Hanyeရဲ့ အရောင်းရဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ Travel caseလေးတွေဖြစ်ပါတယ် • Mini round cable case and Mini Square cabel case • Small cable box • HDD cable box ဆိုပြီး ၃မျိုးရှိပါတယ်ရှင့် • ကိုယ်အဆင်ပြေရာ Sizeကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး အရောင်ပေါင်းများစွာလဲရှိပါတယ်နော်
3,000 Ks 2,500 Ks
ခရီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် အားသွင်းကြိုးတွေ နားကျပ်တွေနဲ့ တော်တော်အလုပ်ရှုပ် ဟိုပျောက်ဒီပျောက်နဲ့ ကြုံဖူးကြမှာပါ Micro SD Cardတို့ ဖုန်းSim cardတို့လဲ ဟိုပျောက်ဒီပျောက်ဖြစ်ပေါင်းလဲများနေပြီလား? • အဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးမှာကတော့ Japan Brand Hanyeရဲ့ အရောင်းရဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့…
Ultra Bright Portable USB Light Lamp Compact and light weight. Mini size, convenient to carry and store. Soft shade to avoid the direct LED light shine for effective eyesight protection. Flexible body, suitable for many place and occasions such as bedside, desk, indoor and outdoor, just plug and play, easy to use. Compatible with Cager/…